स्वास्थ्य Archives - Hello Punarwas
– पवित्रा बुढा पुनर्वास, २२ साउन । कञ्चनपुरको पुनर्वासमा मौसममा आएको परिवर्तनका कारण मौसमी भाइरलको संक्रमण बढेको छ । दिनप्रतिदिन मौसम परिवर्तन भइरहँदा स्थानीय क्लिनिकहरुमा मौसमी भाइरलको संक्रमण बढेको हो । वर्षातमा पानीका मुहान दूषित भएका कारण पानीजन्य रोगका बिरामी…Read more
हेल्लो समाचारदाता पुनर्वास,३ भदौ चुरोटको लतमा फसेपछि छुटाउन एकदमै गाह्रो पर्छ । यो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । हानिकारक हुँदाहुँदै पनि यसको लतमा फस्ने धेरै छन् । कतिपय साथीभाइको लहैलहैमा लागी धूम्रपानको लतमा फसेका छन् भने कतिपय तनाव कम गर्ने…Read more
बेनी अस्पताललाई एम्बुलेन्स
म्याग्दी, ३ भदौ सदरमुकाममा रहेको बेनी अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एम्बुलेन्स प्राप्त भएको छ । जिल्ला अस्पतालको मातहत सञ्चालन हुने गरी मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्सले शुक्रबारदेखि सेवा शुरु गरेको छ । सो एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्दै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुरमा थापाका प्रमुख राजनीतिक…Read more
सुनसरी, भदौ २ http://hellopunarwas.com सुनसरीको धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठनामा उपचारार्थ ४ जनाको अज्ञात रोगबाट मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेहरु ६ देखि १४ वर्ष उमेर समुहका बालबालिका रहेका छन् । उच्च ज्वरो आउने, रगत छाद्ने, पेट…Read more
नागरिकको सेवामा नेपाली सेना, साथमा अमेरिकी सेना
काठमाडाैं , भदौ २ नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको संयुक्त आयोजनामा गोरखा नगरपालिका ८ आहालेको सरस्वति माध्यमिक विद्यालय परिसरमा पाँच दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिएको छ। नेपाली सेना र अमेरिकन सेनाका बिशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा दिएको शिविरमा दुई हजार…Read more
हेल्लो समाचारदाता नवलपरासी, २७ साउन स्थापना भएको करिब ८० वर्षपछि नवलपरासी जिल्लाको पृथ्वी चन्द्र अस्पतालमा फार्मेसी सेवा शुरु भएको छ । पटक पटकको अथक प्रयासपछि मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराएपछि जिल्लाको एक मात्र पृथ्वीचन्द्र अस्पतालले फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरेको हो ।…Read more
यी पाँच लक्षणबाट बुझ्न सकिन्छ, शरीरमा भिटामिन कमी भएको
कहिलेकहि हामी आफ्नो शरीरमा हुने परिवर्तनलाई गंभिरतापूर्वक लिदैनौ । जस्तो छ, त्यसैलाई ठीकठाक ठान्छौ । तर, यसरी शरीरमा देखिने सबै परिवर्तनलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । कतिपय अवस्थामा जटिल पनि हुनसक्छ । यदि अचानक शरीर पहेंलो हुन थाल्यो र ओंठको चमक…Read more
डा. केसीको स्वास्थ्य ‘अत्यन्तै जोखिममा’
काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षामा सुधार माग राखेर १७ दिनदेखि आमरण अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको चिकित्सकले बताएका छन्। चिकित्सकहरूले डा. केसीको स्वास्थ्यमा संक्रमणको उच्च जोखिम बढेको भन्दै विशेष कारणबाहेक नजिक जान र भेट्नसमेत रोक लगाएका छन्। केसीको स्वास्थ्य…Read more
हेल्लो समाचारदाता इलाम, २४ साउन भाइरल ज्वरोका कारण अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ । बर्खायाममा फैलिने भाइरलका कारण स्वास्थ्य संस्थामा आउनेको भीड पनि बाक्लिँदै गएको छ । प्रकोप बढेपछि साविकभन्दा दोब्बरको संख्यामा स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि बिरामी आएका छन् ।…Read more
८ प्रवृत्तिका साथी, तपाई कस्तो साथी ?
‘साथी ।’ भलै यो शब्द छोटो लाग्न सक्छ, तर यसमा अनेक भेराइटी पाइन्छ । तपाईको खास साथी कस्ता होलान् ? यो तपाईको रुचीमा निर्भर रहन्छ । किनभने साथी भन्नसाथ सबै एकनास हुँदैनन् । साथीका अनेक रुप र प्रवृत्ति हुन्छन् ।…Read more
सफल बन्न के गर्ने ?
जीवनमा उतारचढाव आइरहन्छ । जसको दिमाग स्वस्थ हुन्छ, उसले यस्ता उतारचढावलाई सहजै स्वीकार्छ । दिमागलाई स्वस्थ राख्नका लागि आफूसँग रहेका सामान्य अस्वस्थ व्यवहार पन्छाउनुपर्छ । आफ्नो व्यवहार, भावना र विचार नियन्त्रण गर्न सकियो भने सफलता नजिकिँदै जान्छ । गल्ती महसुस…Read more
नितम्ब ठूलो हुनुको अर्थ थाहा छ तपाईंलाई ?
बीबीसी एक नयाँ अनुसन्धानका अनुसार जसको तौलको ठिक छ तर नितम्ब, जाँघ र खुट्टामा धेरै बोसो जमेको छ भने उनीहरुमा स्ट्रोक, मधुमेह र हृदयघातको आशंका कम हुन्छ । सेल रिसर्च जर्नलमा यो अनुसन्धान छापिएको छ । उक्त अनुससन्धान अनुसार जो…Read more
हेल्लो समाचारदाता साउन २१, २०७४ यदि तपाई कुखुराको मासु सेवन गर्न रुचाउनुहुन्छ र बजारमा उपलब्ध बोइलर खरिद गर्नुहुन्छ भने सोच्नुहोस् । स्वास्थ्य बचाउने कि स्वाद ? अप्राकृतिक ढंगले उत्पादन गरिएको कुखुराको मासुले हाम्रो स्वास्थ्यमा गंभिर समस्या निम्त्याउँछ । पछिल्ला अध्ययनहरुले…Read more
यी फलको बियाँ कति उपयोगीः मधुमेहदेखि क्यान्सरसम्म रोक्ने
हेल्लो समाचारदाता २१ साउन यी फलको बियाँ कति उपयोगीः मधुमेहदेखि क्यान्सरसम्म रोक्ने कति फलका बियाँखानमा प्रयोग हुँदैन। फल खान्छौ, बियाँ खादैनौ । केहि यस्ता फल छन्, जसको बियाँ निकै उपयोगी हुन्छ, खासगरी स्वास्थ्यका दृष्टिले । जस्तो स्याउको कुरा गरौ, वा…Read more
नेपालमा १,२१३ प्रजातिका झ्याउ : स्वास्थ्य, वातावरण, व्यावसायिक रूपमा उपयोगी
दीपेन्द्र राई १९ साउन, २०७४ झ्याउ । ढुसी र लेउ प्रजातिका वनस्पति मिलेर बनेको झ्याउ स्वास्थ्यका लागि उपयोगी मानिन्छ । यसलाई चिया बनाएर पिउँदा टन्सिल र रुघाखोकी निको हुन्छ । मलहम बनाएर औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यतिमात्रै होइन,…Read more
५० बर्षमा पनि कसरी आकर्षक र जवान ? यस्तो छ अक्षय कुमारको फिटनेस फर्मुला
उनी हरेक बिहान घाम उदाएसँगै उठ्छन् बलिउडका ‘खिलाडी’ अक्षय कुमार कसरी यत्तिका उमेरसम्म पनि उत्तिकै जवान र तन्दुरुस्त देखिएका होलान् ? निसन्देह यो उनको खानपान र दिनचर्याले गर्दा हो । भनिन्छ, अक्षय कुमार राती अबेरसम्म कहिल्यै बस्दैनन् । बिहानको झुल्के …Read more
निस्क्रिय बस्नुहुन्छ ? तपाईलाई लाग्नसक्छ यस्तो गंभिर रोग कसरी बच्ने ?
डा. हेमराज कोइरालाको टिप्स ‘दैनिक एकबट्टा चुरोट खानेलाई क्यान्सर लाग्ने जति धेरै खतरा छ, त्यो भन्दा धेरै खतरा श्रम, व्यायाम र मेहनतबाट पन्छिएर निस्क्रिय जीवन जिउनेहरूलाई छ ।’ सुख-सुविधा र साधनहरूको उपयोगसँगै अल्छे र निस्क्रिय जीवनशैलीले हाम्रो समाजलाई रोगी बनाउँदैछ ।…Read more
गर्मीमा भुलेर पनि यस्ता खानेकुरा नखाऔं
तपाईले अनुभव गरेकै हुनुपर्छ, गर्मीमा पेट त्यति स्वस्थ्य हुँदैन । खानेकुरा पच्दैन । गर्मीमा छिटै सड्ने, गल्ने भएकाले खानेकुराहरु ताजा पनि रहँदैन । बासी र सडेगलेको खानाले सास्ती दिन्छ । त्यसैले विज्ञहरु सुझाव दिन्छन्, गर्मीका बेला खानपानमा सतर्क हुनुपर्छ ।…Read more
रोग नै पत्ता नलाग्ने रोग, १२ लक्षण, रोग कसरी छुट्टाउने ?
डा. सि पी सेडाई, नशा तथा मनोरोग बिशेषज्ञ शरद ३० वर्षे, मध्यम वर्गीय किसान हो । ऊ जहिले पनि बिरामी भएको अनुभव गर्छ । तीन वर्षदेखि ऊ बिरामी छ । उसलाई पेट दुख्छ । पेटमा अप्ठेरो महसुस हुन्छ । टाउको…Read more
बृद्ध हुनु प्राकृतिक नियम हो । उमेर बढेसँगै अनुहारको छालापनि चाउरी पर्छ र तन्किन सुरु गर्छ । तर उमेर नपुग्दै छाला चाउरियो भने के गर्ने ? हो युवा अवस्थामा नै छाला चाउरी पर्न थाल्यो भने अनावश्यक र महंगो क्रिम र…Read more